ဝတ်စုံများ - Come4Buy eShop
$ 12.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ - $ 136.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အမိုက်စား အနက်ရောင် V-Back Layered Ruffle...
$ 23.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 28.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
COME4BUY Shopping မှကြိုဆိုပါတယ် ~~~~~ Customer Reviews များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်~~~~~ Shoulder (cm) Bust (cm) Waist Size (cm) Length (cm) Hip Size(cm) XS 27 78.5 63 85.5 87 S 28 82.5 67 87 ...
Black က / L ကို Black က / M က Black က / S က Black က / XS ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Sexy ကျတဲ့ ၀တ်စုံဝတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး...
Sexy Dress ၀တ်ထားသော အမျိုးသမီးများ Sexy Dress အနက်ရောင် ဇာကြိုးဝတ်ထားသော အမျိုးသမီးများ A-line စကတ် ပုံမမှန်သော Chiffon Dress ၊ Summer Solid colour Pattern Party Dresses များတွင် အဖြူရောင်၊ Wine Red၊ Purple၊ Green, Navy Blue,...
Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL Black က / XXL Black က / XXXL Black က / 4XL Black က / 5XL အဖြူ / S က အဖြူ / M က အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL အဖြူ / XXL အဖြူ / XXXL အဖြူ / 4XL အဖြူ / 5XL အပြာရင့် / S အပြာရင့် / M အပြာရင့် / L အပြာရင့် / XL အပြာရင့် / XXL အပြာရင့် / XXXL အပြာ / 4XL အပြာ / 5XL ဝိုင်နီ၊ ဝိုင်နီ / M ဝိုင်နီ၊ L နီ ဝိုင်နီ / XL ဝိုင်နီ / XXL ဝိုင်နီ / XXXL ဝိုင်နီ / 4XL ဝိုင်နီ / 5XL အပြာရောင် / S က အပြာရောင် / M က အပြာရောင် / L ကို အပြာရောင် / XL အပြာရောင် / XXL အပြာရောင် / XXXL အပြာရောင် / 4XL အပြာရောင် / 5XL ခရမ်းရောင် / S က ခရမ်းရောင် / M က ခရမ်းရောင် / L ကို ခရမ်းရောင် / XL ခရမ်းရောင် / XXL ခရမ်းရောင် / XXXL ခရမ်းရောင် / 4XL ခရမ်းရောင် / 5XL အစိမ်းရောင် / S က အစိမ်းရောင် / M က အစိမ်းရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / XL အစိမ်းရောင် / XXL အစိမ်းရောင် / XXXL အစိမ်းရောင် / 4XL အစိမ်းရောင် / 5XL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Sexy အမျိုးသမီးများ ဘက်စုံထုပ်ပိုးထားသော ပုံစံပြောင်းနိုင်သော...
$ 28.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 38.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ပါတီသတို့သမီးအရံဝတ်စုံ Sexy Women Multi way Wrap Convertible Boho Maxi Club Red Dress Bandage Long Dress Party သတို့သမီးအရံ Infinity Robe Longue Femme။ ဝတ်ပုံစားပုံ 15 မျိုးကျော်ပါတဲ့ ဂါဝန်တစ်ထည်...
Beige သ / S က Beige သ / M က Beige သ / L ကို Beige သ / XL Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL နီလာ / S နီလာ / M နီလာ / L နီလာ / XL 2hao / S ကိုရှမ်ပိန် 2hao / M ကရှမ်ပိန် 2hao / L ကိုရှမ်ပိန် 2hao / XL ရှမ်ပိန် မြက်စိမ်းလန်းသော / S မြက်စိမ်းလန်းသော / M က မြက်စိမ်းလန်းသော / L ကို မြက်စိမ်းလန်းသော / XL အစိမ်းရောင် / S က အစိမ်းရောင် / M က အစိမ်းရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / XL celadon / S ကို celadon / M က celadon / L ကို celadon / XL ပန်းပွင့်မီးခိုးရောင် / S ပန်းပွင့်မီးခိုးရောင် / M ပန်းပွင့်မီးခိုးရောင် / L ပန်းရောင်မီးခိုးရောင် / XL Khaki / S က Khaki / M က Khaki / L ကို Khaki / XL ခရမ်းရောင်အပြာ / S ခရမ်းရောင်အပြာ / M က ခရမ်းရောင်အပြာ / L ကို ခရမ်းရောင်အပြာ / XL ပန်းရောင် / S က ပန်းရောင် / M က ပန်းရောင် / L ကို ပန်းရောင် / XL ခရမ်းရောင် / S ခရမ်းရောင် / M ခရမ်းရောင် / L ခရမ်းရောင် / XL အနီရောင် / S က အနီရောင် / M က အနီရောင် / L ကို အနီရောင် / XL ပဲငါးပိ/S ပဲငါးပိ/အမ်၊ ပဲငပိ/L ပဲငါးပိ / XL ကြည်းတပ်အစိမ်း / S ကြည်းတပ်အစိမ်းရောင် / M က ကြည်းတပ်အစိမ်းရောင် / L ကို ကြည်းတပ်အစိမ်းရောင် / XL စပျစ်သီးခရမ်းရောင်/S စပျစ်သီး ခရမ်းရောင်/M စပျစ်သီးခရမ်းရောင် / L စပျစ်သီး ခရမ်းရောင် / XL ရေတပ်အပြာရောင် / S က ရေတပ်အပြာရောင် / M က ရေတပ်အပြာရောင် / L ကို ရေတပ်အပြာရောင် / XL Burgundy / S က Burgundy / M က Burgundy / L ကို Burgundy / XL အစိမ်းရောင် Mint / S အစိမ်းရောင် Mint / M စိမ်းလန်းသော Mint / L အစိမ်းရောင် Mint / XL အပြာရောင် မီးခိုးရောင်/S အပြာရောင် မီးခိုးရောင်/M အပြာရောင် မီးခိုးရောင်/L အပြာရောင် မီးခိုး / XL အပြာနုရောင် / S အပြာရင့် / M အပြာနု / L အပြာရင့် / XL ရှမ်ပိန် / S ။ ရှမ်ပိန် / M ။ ရှမ်ပိန် / L ရှမ်ပိန် / XL ဖုန်ထူပန်းရောင် / S ကို ဖုန်မှုန့်ပန်းရောင် / M က ဖုန်မှုန့်ပန်းရောင် / L ကို ဖုန်မှုန့်ပန်းရောင် / XL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
လာဝယ်ပါ 4BUY မှ ကြိုဆိုပါတယ် အင်္ကျီလက်အရှည် (cm) Bust (cm) Waist Size (cm) Length (cm) Shoulder Size(cm) XS 16 89 65 86.5 38 S 17 96 65 87 39...
အဖြူ / XL အဖြူ / L ကို အဖြူ / M က အဖြူ / S က အဖြူ / XS ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အမျိုးသမီးများအတွက် နွေရာသီ ဖက်ရှင်အကျီ...
ပန်းပွင့်ဂါဝန် အမျိုးသမီးများ ပခုံးပြတ်ဂါဝန် Bohemian Mini Dress ခေတ်ဟောင်း အနီရောင် ပါးစပ်ကြီးကြီးနှင့် စာလုံးအသစ်အဆန်း ပုံနှိပ်အမျိုးသမီး နွေရာသီဂါဝန် လက်ပြတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Boho ၀တ်စုံ Sexy Dresses ပစ္စည်း : Chiffon Asian Size Bust...
E101606 / L ကို E101606 / M ကို E101606/S E101606/XL E101606/XXL E101619 / L ကို E101619 / M ကို E101619/S E101619/XL E101626 / L ကို E101626 / M ကို E101626/S E101626/XL E101626/XXL E101628 / L ကို E101628 / M ကို E101628/S E101628/XL E101628/XXL E101630 / L ကို E101630 / M ကို E101630/S E101630/XL E101630/XXL E101639 / L ကို E101639 / M ကို E101639/S E101639/XL E101639/XXL E101641 / L ကို E101641 / M ကို E101641/S E101641/XL E101641/XXL HL00996/L HL00996/M HL00996/S HL00996/XL HL00996/XXL YH01228/L YH01228/M YH01228/S YH01228/XL YH01228/XXL YH01235/L YH01235/M YH01235/S YH01235/XL YH01235/XXL YH01236/L YH01236/M YH01236/S YH01236/XL YH01236/XXL YH01237/L YH01237/M YH01237/S YH01237/XL YH01237/XXL YH01244/L YH01244/M YH01244/S YH01244/XL YH01244/XXL YH01309/L YH01309/M YH01309/S YH01309/XL YH01309/XXL YH01312/L YH01312/M YH01312/S YH01312/XL YH01312/XXL YH01319/L YH01319/M YH01319/S YH01319/XL YH01319/XXL YH01320/L YH01320/M YH01320/S YH01320/XL YH01320/XXL YH01322/L YH01322/M YH01322/S YH01322/XL YH01322/XXL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အနက်ရောင် အဖြူကွက် အစက် ခေတ်ဟောင်း...
$ 38.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 69.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
လာပါ 4BUY SHOPPING မှ ကြိုဆိုပါတယ် ပစ္စည်း : ပိုလီစတာ ၊ Cotton Size SML XL XXL ယူရို 36 US6Russia 42 Brial P ယူရို 38 US 8 Russia 44 Brial M ယူရို 40 US 10 Russia...
001 / L ကို 001 / M က 001 / S က 001 / XL 001 / XXL 002 / L ကို 002 / M က 002 / S က 002 / XL 002 / XXL 003 / L ကို 003 / M က 003 / S က 003 / XL 003 / XXL 004 / L ကို 004 / M က 004 / S က 004 / XL 004 / XXL 005 / L ကို 005 / M က 005 / S က 005 / XL 005 / XXL 006 / L ကို 006 / M က 006 / S က 006 / XL 006 / XXL 007 / L ကို 007 / M က 007 / S က 007 / XL 007 / XXL 008 / L ကို 008 / M က 008 / S က 008 / XL 008 / XXL 009 / L ကို 009 / M က 009 / S က 009 / XL 009 / XXL 010 / L ကို 010 / M က 010 / S က 010 / XL 010 / XXL 011 / L ကို 011 / M က 011 / S က 011 / XL 011 / XXL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
V-neck Solid Summer Dress ချည်သားလက်တို A Line Bohemian Mini Flared Dresses အဖြူ Lace Eyelet Single Breasted V-neck Solid Summer Dress အမျိုးသမီးများ အရောင် : အဖြူရောင်/ ပန်းရောင်/ အဝါ/ ခရမ်းရောင်/ အနက်ရောင် / Navy...
အဖြူ / S က အဖြူ / M က အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL ပန်းရောင် / S က ပန်းရောင် / M က ပန်းရောင် / L ကို ပန်းရောင် / XL အဝါရောင် / S က အဝါရောင် / M က အဝါရောင် / L ကို အဝါရောင် / XL ခရမ်းရောင် / S က ခရမ်းရောင် / M က ခရမ်းရောင် / L ကို ခရမ်းရောင် / XL Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL ရေတပ်အပြာရောင် / S က ရေတပ်အပြာရောင် / M က ရေတပ်အပြာရောင် / L ကို ရေတပ်အပြာရောင် / XL Sky Blue / S Sky Blue / M Sky Blue / L Sky Blue / XL အစိမ်းရောင် / S က အစိမ်းရောင် / M က အစိမ်းရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / XL နှင်းဆီပန်းရောင် / S နှင်းဆီပန်းရောင် / M နှင်းဆီပန်းရောင် / L နှင်းဆီပန်းရောင် / XL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
လီနင် ဂါဝန်ရှည် ရာသီသစ် Plus Size အမျိုးသမီးအဝတ်အစား ဥရောပ နှင့် အမေရိက New Hem Slit လက်ရှည် ချည်သားနှင့် လီနင် ဂါဝန်ရှည် အရောင်- ဝိုင်နီ၊ မီးခိုးရောင်၊ အစိမ်း၊ အနက်၊ တော်ဝင်...
အစိမ်းရောင် / S က အစိမ်းရောင် / M က အစိမ်းရောင် / L ကို အစိမ်းရောင် / XL အစိမ်းရောင် / 2XL အစိမ်းရောင် / 3XL အစိမ်းရောင် / 4XL အစိမ်းရောင် / 5XL တော်ဝင်အပြာရောင် / S တော်ဝင်အပြာရောင် / M တော်ဝင်အပြာရောင် / L တော်ဝင်အပြာရောင် / XL တော်ဝင်အပြာရောင် / 2XL တော်ဝင်အပြာရောင် / 3XL တော်ဝင်အပြာရောင် / 4XL တော်ဝင်အပြာရောင် / 5XL ဝိုင်နီ / S ဝိုင်နီ / M ဝိုင်နီ / L ဝိုင်နီ / XL ဝိုင်နီ / 2XL ဝိုင်နီ / 3XL ဝိုင်နီ / 4XL ဝိုင်နီ / 5XL မီးခိုးရောင် / S က မီးခိုးရောင် / M က မီးခိုးရောင် / L ကို မီးခိုးရောင် / XL မီးခိုးရောင် / 2XL မီးခိုးရောင် / 3XL မီးခိုးရောင် / 4XL မီးခိုးရောင် / 5XL Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL Black က / 2XL Black က / 3XL Black က / 4XL Black က / 5XL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
$ 27.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 39.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Maxi Dress နွေ/နွေရာသီ ဘေးအိတ်ကပ် အမျိုးသမီးအတွက် အစိုင်အခဲအရောင် ဂါဝန်ရှည် စကတ်ရှည် အရောင်- အနီရောင်၊ အနက်ရောင် အရွယ်အစား- S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL ပင်မအထည်ဖွဲ့စည်းမှု- ပိုလီစတာဖိုက်ဘာ (Polyester) 81%-90% အထည်အမည်- ချည်ရောစပ်ပုံစံ-...
အနီရောင် / S က အနီရောင် / M က အနီရောင် / L ကို အနီရောင် / XL အနီရောင် / 2XL အနီရောင် / 3XL အနီရောင် / 4XL အနီရောင် / 5XL Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL Black က / 2XL Black က / 3XL Black က / 4XL Black က / 5XL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
နွေရာသီ လည်ပင်းဝိုင်း လက်ရှည်...
$ 36.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 192.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဂါဝန်ပါတီည နွေရာသီ လည်ပင်းဝိုင်း လည်ပင်းရှည် လက်ရှည် ခါးမြင့် ဂါဝန် အနက်ရောင် လိုက်ဖက်ပြီး မီးတောက်ကွက်များ ထပ်တင်ထားသော Ruffle Hem ဂါဝန် အမျိုးသမီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဇာကွက်လက်ရှည် ဂါဝန် လက်ရှည် အမျိုးသမီး နွေဦး...
အနက်ရောင်ဂါ ၀ န် အနက်ရောင်ဂါ ၀ န် / M အနက်ရောင်ဂါ ၀ န် / L အနက်ရောင် Dress / XL ပန်းရောင်ဂါဝန်/S ပန်းရောင်ဂါဝန်/M ပန်းရောင်ဂါဝန်/L ပန်းရောင်ဂါဝန် / XL ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Sexy V-Neck Suspender အမျိုးသမီး Maxi...
$ 39.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Party Dresses Sexy Sling V-neck Suspender Women Maxi Dress Dress စတိုင်သစ် Party Dresses Fabric Name: Polyester Fiber Style: Sexy Pattern: Plain Style: Sling Skirt Length: Long Skirt စကတ် အမျိုးအစား:...
S / White, S / ပန်းရောင် S / အပြာရောင် M / White, M / ပန်းရောင် M / အပြာရောင် L / White, L / ပန်းရောင် L / အပြာရောင် XL / White, XL / ပန်းရောင် XL / အပြာရောင် 2XL / White, 2XL / ပန်းရောင် 2XL / အပြာရောင် ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Sexy Halter Lace Chiffon Dress...
$ 41.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 69.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ညနေခင်းဂါဝန် ကြော့ရှင်းသောညနေခင်းဂါဝန် Halter ဇာကြိုး Chiffon ဂါဝန် ညနေခင်းဂါဝန်ရှည် ခွဲခြမ်းစကတ် အထည်အမည် : Chiffon ပုံစံ : Sexy ပုံစံ : ရိုးရိုးစကတ်အရှည် : စကတ်ရှည် စကတ်အမျိုးအစား : A-line...